Nandray ny raharaha malaky ny Tobim-paritry ny Zandarimaria any an-toerana hikarohana ny antony sy handraisana ny fepetra hisorohana ny fahatezeran'ireo fokonolona nahita ity zazalahikely voafatotra. Lasa manomboka manao asa ratsy avokoa ireo ny zaza tsy ampy taona tato ho ato. Tsy vao ela no nisy mpanao sinto mahery, tsy ampy taona, naboridan` ny olona tetsy Mahamasina. Tetsy Ambondrona ihany koa dia nisy zaza tsy ampy taona tratran` ny mpitandro filaminana vao azy nanao sinto mahery ihany koa. Ny zoma lasa teo, nahitàna zaza tsy ampy taona tamin` ireo mpivaro-tena nandritra ny fanadiovana ny lalan` I Tsaralalàna. Tsy voalohany no nisy ireo zaza tsy amy taona tratran`ny polisy manendaka sy mangalatra. Sarotra ny hanafoana azy ireny, satria voasambotra, voatazona amam-bola, miverina manao asa ratsy indray.